TickTick dia mahazo vaovao ho an'ireo mpampiasa maimaimpoana sy premium | Androidsis
TickTick fanavaozam-baovao miaraka amin'ny tondro fandrosoana, lisitra marani-tsaina ary ny zahao grid
Raha misy kalitaon'ny TickTick dia miatrika fampiharana mamela isika tantano ny lisitry ny raha-hatao rehetra amin'ny fomba tsotra sy haingana. Raha mijery ny hevitra navoakan'ny mpampiasa izahay, dia ho hitantsika io anarana iraisana io eo amin'ny laharana voalohany na avo indrindra amin'ity fampiharana ity izay novaina tato anatin'ny andro vitsivitsy. Fampiharana izay mifototra amin'ny fananana ireo lisitra tokony hatao sy fampahatsiahivana isan-karazany araka ny antenainao, fa koa ho fijerena kalandrie sy lisitra azo zaraina ary koa lohahevitra maro samihafa hanovana ny endrika hita maso.
Na dia manana kinova maimaimpoana aza izy, ny kinova premium, amin'ny vidiny $ 1,99 isam-bolana, dia mahazo andianà vaovao tena mahaliana toy ny ny zana-kisary ao amin'ny kalandrie, izay manamora ny fahitana ny fandaharam-potoana nataonao tamina daty manokana, sy ny lisitra smarts, izay mamela anao hanao lisitra miorina amin'ny sivana. Saingy isika izay mampiasa maimaim-poana ity fampiharana ity dia tsy avela tsy misy na inona na inona, satria bara fandrosoana vaovao no voaray izay manolotra tondro maso momba ny fomba akaiky hanatanterahantsika andiana lahasa.
1 Ilay kinova vaovao
2 Fa inona ny TickTick?
Ilay kinova vaovao
Tsy ny fanavaozana vaovao rehetra dia tokony hanana fiasa vaovao zillion, fa mila mifanaraka tsara kosa manatsara ny singa lehibe. Ny TickTick ao amin'ny kinova vaovao dia mandeha toy izao ary manolotra endrika vaovao telo tena mahaliana.
Ny fomba fijery vaovao mba hahamora ny fitadiavana ireo lisitra sy fandaharam-potoana rehetra ananantsika ao amin'ny fampahatsiahivana lisitra marani-tsaina izay mamela hamorona azy ireo miorina amin'ny sivana, dia ireo zava-baovao roa ho an'ireo mpampiasa premium. TickTick dia tsy nanadino ireo mpampiasa maimaimpoana, ary samy handray izany tondro izany ny tsirairay, izay mampiseho aminao amin'ny fomba mora sy tsotra ny fomba fanaovanao ireo lisitra na asa tokony hatao rehetra ireo.
Misy fiasa vaovao bebe kokoa, saingy kely kokoa noho ny fahaizany hisintona ary milatsaka ao amin'ny fizarana daty hanoratana ny fizotran'ny asa. Ny ambiny dia fanamboarana bibikely sy fanatsarana ny fampisehoana, izay ankasitrahana hatrany.
Fa inona ny TickTick?
TickTick, ankoatry ny fampiharana iray izay mamirapiratra noho ny fahazavany sy ny fahatsorany, dia mampiasa ny fampifanarahana amina fitaovana marobe mba hananana ireo lisitra sy lahasa tokony hatao ao amin'izy rehetra. Voucher hisolo an'i Astrid, toy ny Tasks, izay noresahako andro vitsivitsy lasa izay, Ary ho safidy ho an'ny Todoist, Ka raha mitady fampiharana misy an'ity karazana ity ianao dia tsy maintsy misafidy amin'izy ireo, satria kalitao tsara koa izy ireo.
Ity dia fampiharana izay noforonin'ny ekipa ao ambadiky ny GTasks. fandraisana ampahany amin'ny fijerin'i astrid, izay midika hoe manana interface madio sy mazava izay mandeha mahitsy amin'ny famokarana. Araka ny efa nolazaiko, ny fampiasana mora dia toetra iray hafa, mba hahafahanao mamorona lisitra vaovao rehefa manoratra azy ireo ianao, ary avy eo dia mametraka fampahatsiahivana mandritra ny ora maro isan'andro. Azonao atao ny manova azy ireo isan'andro, herinandro, volana, na taona, ary koa mamerina ilay lisitra mandritra ny andro maromaro.
Manana ny safidinao ianao ampio naoty ny lisitra tokony hatao, mamorona lisitra miaraka amin'ny to-dos sy subtasks eo anelanelany mba hahafahany mizara azy ireo ihany koa. Farany, tapitra miaraka amin'ny "labs", izay sokajy ao amin'ny dingana fitsapana izay voafetra ho an'ireo mpampiasa premium izay mandoa ara-pivavahana isam-bolana.
Rindrambaiko tena atolotra anao manana izany ho an'ny fitaovana rehetra ianao izay anananao ao an-tranonao ary raha te-hahazo ny zava-drehetra ianao dia azonao atao ny mampiasa ny kinova Pro izay manafoana ny fetran'ny latabatra amin'ny lisitra, ny asa ary ny subtasks, ary manampy endri-javatra mahaliana hafa.
TickTick - Lisitry ny Todo sy ny lahasa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » TickTick fanavaozam-baovao miaraka amin'ny tondro fandrosoana, lisitra marani-tsaina ary ny zahao grid
Leagoo V1, endrika hafa miaraka amin'ny fampisehoana tsara